मुखको स्वास्थ्य राम्रो भए धेरै रोगबाट बच्न सकिन्छ–चिकित्सक - Online Majdoor
मुखको स्वास्थ्य राम्रो भए धेरै रोगबाट बच्न सकिन्छ–चिकित्सक
काठमाडौँ, ३ माघ । मानव शरीरभित्र करीब ९० प्रतिशत रोग मुख स्वास्थ्य (ओरल हेल्थ) अर्थात् दाँतजन्य समस्याका कारण हुने गरेको विज्ञहरू बताएका छन् । मुख स्वास्थ्यको संवेदनशील दाँतको समस्यालाई सामान्य ठानेर हेलचेक्राइँ गरिए यसले अरू जटिल प्रकृतिका रोग निम्त्याउने गरेको छ । त्यसैले दाँतको उपचार र हेरचाहमा ख्याल गरेको खण्डमा अधिकांश रोग लाग्नबाटै बच्न सकिने चिकित्सकको भनाइ छ ।
विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोभिड प्रत्यक्ष मुख स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय पनि हो । महामारी सर्ने डरले अहिले पनि धेरै दाँतका बिरामी उपचारका लागि पुग्न सकेका छैनन् । कोभिड मुख, नाक र आँखाबाट सर्ने भएकोले पनि दाँतको समस्या आइहाले पनि कोभिड सर्ने डरले अहिले पनि धेरै बिरामी घरमै छन् । समयमा नै उपचार गर्न नपाए उनीहरूको समस्या थप जटिल बन्दै जानेमा विज्ञको चिन्ता छ । दाँतको उपचार भन्नासाथ मुख स्वास्थ्यसँग जोडिएकाले स्वाभाविकरूपमा आम सर्वसाधारण अहिलेको महामारीमा त्रसित हुन्छन् नै तर अलिकति सावधानी अपनाएर उपचार गरिएको दीर्घकालीन जटिल समस्याबाट छुटकारा पाइने उनीहरूको धारणा छ ।
ॐ समाज डेन्टल हस्पिटलका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ दन्तरोग विशेषज्ञ डा. सुवास घिमिरेले मुखलाई मात्र केयर गर्नसके कोभिडबाट बच्न सकिने बताउनुभयो । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता ‘इम्युनिटी पावर’ कमजोर भएका मानिसलाई कोभिडले बढी चाप्ने भएकोले स्वास्थ्य सावधानी अपनाएको खण्डमा बच्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
कोभिड हावाबाट नभई छुकको छिट्टा, खकार र सिँगानबाट सर्ने रोग भएकोले पर्याप्त जनचेतनाका साथै मास्कको प्रयोग र स्यानिटाइजरको उपयोग सही ढङ्गले गरिए यसको जोखिमबाट बचिने उहाँको भनाइ छ । उहाँले बाहिर निस्कँदा, भीडभाड, बजारतिर जाँदा अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने सुझाउनुभयो । “कोभिड थुकबाट सर्च भने मास्क र फेस सिल्ड लगाउनुप¥यो । हामीले दाँतको उपचार गर्दा बिरामीको खुला मुखमा उपचार गर्नुपर्छ । त्यसैले डाक्टरले स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायसहित उपचार गरियो ।”, उहाँले भन्नुभयो ।
दुर्गमका कर्मचारीका दुःख
किन बढ्दै छ राज्य र रैथानेबीच द्वन्द्व ?
मङ्गलबारदेखि बढी तौल बोक्ने मालबाहक साधनलाई कारबाही गरिने